(Kugcine ukubuyekezwa On: 03/03/2020)
Harry Potter namafilimu kakhulu yimpumelelo ifilimu uchungechunge sonke isikhathi. Abaningi kwezahlakalo kusukela Harry Potter namafilimu badutshulwe ngaphakathi London uqobo. Kungakhathaliseki ukuthi die fan onzima Harry Potter movie noma incwadi uchungechunge, London ngokungangabazeki indawo engcono vakashela i eyiqiniso Harry Potter isipiliyoni. Ufuna ukwazi ukuthi 5 Izindawo ukuvakashela i-Harry Potter yakho Impelasonto e London? Londoloza Isitimela ibeke lendlela uhlu ukwenza wizarding adventure yakho eyodwa kulula futhi kuyajabulisa kunokwabo!
Lona nakho ultimate ezincwadini zethu! Bheka isandla kuqala amasethi, zokubhukuda, kanye zasesiteji esetshenziswa zonke Harry Potter namafilimu! Isinyathelo ngaphakathi ezinye izindawo ifilimu kuhlanganise; IHholo Omkhulu, Ihhovisi Dumbledore futhi Hagrid eqhugwaneni.
Kuphi ukuthola lo? qhubekela phambili phezu kuya-Warner Bros. Studios Tour London. The Making of Harry Potter kuyinto Luhambo yomphakathi Leavesden in mpumalanga yeNgilandi. Hhayi ukuze kudidaniswe Wizarding Umhlaba Harry Potter ye-Universal Studios indaba ephathwayo amapaki. Kuyinto umbukiso unomphela ngesevisi eyiqiniso ekusithekeni zizobona we Harry Potter namafilimu. Ube nosuku imilingo out nge ekusithekeni uhambo Harry Potter namafilimu at Warner Bros. Studio Tour London.
Phakathi amahora 9am futhi 9 ntambama ungakwazi ukukhokhela ukuba photographer professional kanye usizo umsizi uthola engcono isithombe, ephelele ne Harry Potter isikhafu kanye / noma Wand. Ungakwazi namanje ukuthatha isithombe sakho lapha mahhala.
Uma ungakwazi kuphela uvakashele phakathi isiqongo ongqi futhi nemali ezisele, ungase ufise cabangela ukuthenga VIP Photo Pass umsila wenkomo. Lokhu kuhlanganisa isiteji 9 ¾ umsila wenkomo, isithombe kanye kumugqa wakho gxuma, konke £ 20.
Uyini Harry Potter Impelasonto e London ngaphandle kokuzama a cauldron? Lokhu yemilingo Cocktail Experience kuyinto 1 ihora 45 imiz ekilasini acwilisiwe e London. Don izambatho zakho, ubambe wands yakho futhi ulungele potions eklasini lakho ngomoya kakhulu kuze kube manje, nale ogxile yemilingo Cocktail Experience for ezimbili ngesikhathi cauldron, London.
Emsebenzini esiteshini akho enzelane, uzothola ukuhlola magic yakho Wand ngokuthulula isiphuzo wamukelekile. Uyobe zisebenzisa ekhethekile amakhono yamangqamuzana Mixology yenza elixirs yakho okumnandi, ngamunye okuzokwenza banezimfanelo ezahlukene kanye nemiphumela. Lungela besazwana magic ezinye eLondon kakhulu enchanting cocktail isipiliyoni!
Utshwala khulula, gluten nezinketho vegan bonke atholakalayo
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Izindawo Ukuze Vakashela Ukuze Harry lakho Potter Weekend in London” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/harry-potter-weekend-london/– (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)